लोकतन्त्र अझै सुरक्षित छैन : पूर्व सभामुख ढुंगाना | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
लोकतन्त्र अझै सुरक्षित छैन : पूर्व सभामुख ढुंगाना
प्रकाशित मिति १२ श्रावण २०७५, शनिबार १५:४८ लेखक नेपाली जनता
चितवन । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले लोकतन्त्र अझै पनि असुरक्षित रहेको बताएका छन् । नवलपुरको गैंडाकोटमा शनिबारदेखि सुरू भएको नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसाेशिएसनकाे १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै ढुंगानाले संसारमा कुनै पनि कम्युनिष्टले लाेकतन्त्र नजाेगाएकाे बताए ।
‘संविधान लोकतान्त्रिक छ । तर जनमत लोकतन्त्रवादीले सत्ता चलाउने आएन । सत्तामा कम्युनिष्टहरू छन् ।’ उनले भने, ‘संसारमा कुन कम्युनिष्टले लोकतन्त्रको रक्षा गरको छ । यसको रक्षा गर्ने दायित्व प्रजातन्त्रवादीको हो ।’
दुई तिहाइको शक्ति बनाएका कम्युनिष्टहरू अझै एकीकृत हुन खोजेको तर लोकतन्त्रवादी कांग्रेसभित्र एकता खोज्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनले कांग्रेस विस्तारित र फराकिलो हुनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनले अनुरोध गरे, ‘नेपाली काँग्रेस अब संकीर्ण हैन फराकिलो हुनु पर्छ । यसका लागि नेता ज्यूहरूले वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउनु पर्छ ।’
कांग्रेसले भविष्यका राम्रा योजना बनाउनु पर्ने भन्दै उनले सधै इतिहासका कुरा मात्रै गर्दै हिँड्नुकाे सट्टा भविष्य देखाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सत्ताधारी दलको व्यवहारले संविधान बाँदरको हातमा नरिवल बन्ने खतरा बढेको बताए । ‘आपतकालको झल्को आउने गरेर सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो गलत हो,’ लेखकले भने ।
डाक्टर केसी र कान्तिपुरको मुद्दामा पूर्ण इजलासमा बहस जारी
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेका…
फिल्म निर्मात्री जोशी ठगी काण्डमा पक्राउ
इटहरी । नेपाली फिल्मकी कलाकार एवम् निर्मात्री प्रज्ञा जोशी पक्राउ परेकी छिन् । प्रहरीले उनलाई इटहरीबाट पक्राउ गरेको हो…
सावधान ! गुद्द्वार चिलाउँछ ? कारण अहिले जान्नुहोस् नत्र यस्तो घातक हुनसक्छ
गुदद्वार चिलाउने समस्या प्रायश: देखिने समस्या हो । गुदद्वार अनि त्यस वरिपरिको छाला चिलाउँछ र कतिपय समयमा त यो…
जंगबहादुरको हत्या जारको आक्रमणबाट
काठमाडौं । तत्कालीन श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाको निधनसम्धन्धी थुप्रै मिथक छन्। सर्लाहीको जंगलमा शिकार खेल्न जाँदा सेतो बाघको…
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले उपत्यकाबासीले भोगिरहेका खानेपानीको समस्या हल गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सक्षम भएर…